Ngingayithola kanjani imali yokuthengisa izinhlelo ze-SEO?
Kunesimo esivamile kuma-ejenti amaningi adijithali adijithali lapho umthengi ebuza khona amasevisi we-SEO, futhi avuma ukusiza, ukungabi nolwazi olunanele kule nkambu ngisho nabasebenzi bezobuchwepheshe. Singaqonda isinqumo sabo njengoba nje bengathandi ukulahlekelwa iklayenti. Phakathi nezinyanga ezimbalwa bazama ukuthola ithrafikhi kwiwebhusayithi futhi bathuthukise isikhundla sabo. Kodwa-ke, abakwazi ukuthola umphumela omuhle ngoba banomsebenzi omncane kule ndawo. Uma ungafuni ukuchitha isikhathi sokufunda i-SEO, kukhona indlela yokuphuma. Ungathola umthengisi we-SEO omuhle.
Ngokuvamile, umthengisi we-SEO ngumuntu noma i-ejensi ehlinzeka ngohla olubanzi lwezinsiza ze-SEO ngamanani angabizi. Umthengisi we-search engine optimization uzokusiza ukuthi uphumelele emkhankasweni wonke wokwenza amaklayenti akho. Umthengisi we-SEO unikeza isikhathi esengeziwe ongayinikela ekusebenzeni kwakho komphakathi futhi ulethe imiphumela emihle kumakhasimende akho.
Kulesi sihloko, uzothola ulwazi oluwusizo lokuthola umdayisi onembile nokuthi ungazuza kanjani kumasevisi akhe.
Kungani udinga ukusebenzisa uhlelo lwe-SEO reseller?
Okokuqala, umthengisi we-SEO omuhle angakunikeza ngamakhono aqinile okuthengisa. Njengoba umsebenzi wakho ungewokuthengisa izinsizakalo zokuthuthukisa, kodwa ukuthengisa imibono yokuthuthukisa, udinga ukwazi ukuphendula imibuzo yakho yamakhasimende mayelana nenqubo ye-intanethi ye-website kanye namaqhinga we-SEO owenzayo ukuthola umphumela omuhle. Yilungele ukunikeza amaklayenti akho imibiko yenyanga ye-SEO kanye nokuqonda kwezobuchwepheshe.
Uma uhlelo lwakho lwe-SEO reseller luhlanganisa kuphela amasevisi we-SEO omhlophe kuphela, akukho lutho lokukhathazeka ngalo. Kulesi simo, amaklayenti akho ngeke azi ukuthi usebenzise izici ezithile zokuthuthukisa. Kusho ukuthi isipiliyoni samakhasimende angalungile nenkampani yakho sizobuyisa emuva, hhayi kuhlelo lwakho lokuthengisela i-SEO. Yingakho udinga ukuqaphela ngenkathi ukhetha i-SEO reseller.
Udinga ukuqaphela imibono ejwayelekile ye-SEO namasu abeka ngemuva kwemikhiqizo yakho yokuthengisela ngaphandle. Kuzokusiza ukuba uzwakale uzwakala futhi uchwepheshe. Ngaphezu kwalokho, kuzokusiza ukuba uqondise amaklayenti akho ngokubheka amasu adinga ukuwenza ibhizinisi labo liphumelele. Ukuze uqiniseke ukuthi wazi ngokwanele ngamasu anikeziwe we-SEO, kudingeka ukhethe uhlelo lwe-SEO reseller olunikeza ukuqeqeshwa okuvamile futhi ungashiyi ngokwakho.
I-SEO yinhlangano ebiza kakhulu
Okwamanje, izinsizakalo ze-SEO zezinga eliphezulu zibiza kakhulu. Umxhumanisi we-SEO ovamile e-USA uthola u-150 $ ngehora nangaphezulu kuye ngokuya kwekhono lakhe. Ngakho uma unquma ukukhipha i-SEO yakho, kufanele ulungele ukukhokha imali engaphezu kuka-100 ngehora ukuze uthole imiphumela emihle. Ungazuza ngokukhishwa kwe-SEO, njengoba kuzokusiza ukuthi ulondoloze imali kumholo wezichwepheshe futhi uthathe amakhasimende akhathazekile Source .